'अहगो' ए प्रोग्राम हो जुन मानव-अवतार बायो-रोबोटको स्वत: पालट भरिएको छ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
कसलाई सुल्ल मान्छे को बारे मा लेख (एनपीसी) ले पहिले नै बुझ्न सक्छ कि "चेतना" वा "आत्मा" को शब्द एक अनुकरण मा अवतार संग दिमाग इन्टरफेस को बीच एक वायरलेस कनेक्शन को तुलना मा हुन सक्छ। सिमुलेशनमा अवतार छ, जस्तै यो थिए, बाह्य नियन्त्रण र यसैले प्रेरित छ। त्यस लेखमा मैले एअर कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिए जुन अवतारको दिमाग चलाउँछ। यस लेखमा म यसको वर्णन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा शीर्षक मेरो दृष्टिमा यो भ्याउँछ: 'अह्रो' ए ए प्रोग्राम हो जुन मानव-अवतार बायो-रोबोटको स्वतन्त्रिलोटमा भरिएको छ। मलाई तल थप व्याख्या गर्न दिनुहोस्।
यदि हामी मान्दछौं कि हाम्रो मानव शरीर (दिमाग सहित) सिमुलेशनमा अवतारहरू छन्, त्यसपछि त्यहाँ एक मूल खेलाडीको साथ एक लाइन हो; हामी प्रेरणालाई किन बोल्छौं? लिङ्क गरिएको लेखमा मैले पनि व्याख्या गरेका थिए कि त्यहाँ धेरै राम्रा अवतारहरू (एनपीसीहरू) हिडिरहेका छन्। त्यसो भए ती वेटरहरू जुन बाह्य रूपमा सञ्चालन गर्दैनन्। यद्यपि ती व्यक्तिहरूले उच्च गुणस्तरका सोचा प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै (अध्ययन गर्ने, क्यारियर बनाउने, आदि) र कला र सङ्गीतको आनन्द उठाउन सक्ने कुनै पनि प्रकारको भावनाको अनुभव गर्न सक्दछन्। त्यस लेखमा मैले नेटफ्लिक्स सीरीज 'रियल हेन्स' बाट रोबोटसँग तुलना गरे र फिल्म प्रशोधनमा उल्लेख गरेको छु। सुविधाको खातिर, मानौं कि कृत्रिम ज्ञान (एआई) निकट भविष्यमा 'मानव बुद्धि' स्तरमा पुग्छ। त्यसपछि तपाईं रोबोटलाई दिमाग दिनुहुन्छ र कसैलाई अब 'वास्तविक मानव' सँगको भिन्नता देख्न सक्नुहुनेछ।
औसत पाठकको लागि यो हामी एक सिमुलेशनमा बस्छौं हेर्नको लागी गाह्रो रहन सक्छ, किनकि हामीले हामी छान्नु भएका सबै चीजहरू, हेर्नुहोस्, गन्ध, सुन्नु र स्वाद साँच्चै आजीवन छ। त्यो ठूलो गल्ती हो। यदि तपाईं कुर्सीमा एक सुपर माइक्रोस्कोपमा जूम गर्नुहुन्छ जसमा तपाइँ बाकि हुनुहुन्छ वा तालिकामा जसको पछि तपाईंले यो पढ्नुहुन्छ, तपाईं अणुहरू र परमाणुहरूको अलग-अलग तत्वहरू बीचमा तिनीहरूलाई खाली बनाउनुहुन्छ। र यदि तपाइँ क्वांटम फिजिक्स प्रयोग (डबल स्लिट्स प्रयोग) गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि एक पर्यवेक्षक हो भने यो मात्र देखिन्छ भने देखिन्छ। यो वीआर चश्मेको सम्झना हो, जहाँ तपाईं पछिको संसार अवस्थित छैन, जब सम्म तपाईं त्यहाँ आफ्नो टाउको घुमाउनुहुन्न। बहु-सिमुलेशन अनुकरणमा प्रत्येक प्लेयरको लागि अवलोकन पनि लिङ्क हुन अनिवार्य छ। यो सिमुलेशन पछि सैद्धांतिक व्याख्यामा गहिरो पार गर्न उपयोगी छ, यहाँ वेबसाइटमा 'सिमुलेशन' वस्तुमा जाँदैछ र पछिको सिद्धान्त बुझ्न सिक्न।
मानौं कि तपाईं सिमुलेशन देख्नुहुन्छ, यसैले, तपाईं आफ्नो मानव अवतार (मस्तिष्कको साथ तपाईंको शरीर) होइनन्, तर तपाई बाह्य खेलाडी हुनुहुन्छ जसले तपाईंको मानव अवतारको माध्यमबाट यो सिमुलेशन देखाउँदछ र प्ले गर्दछ। मेरो स्थान यसैले कि धेरै मानव अवतारहरू जुन नजिकको नियन्त्रणमा छैन र त्यहाँ बाह्य पर्यवेक्षक / खेलाडी कहाँ छ भने हिड्ने धेरै छन्। सबै अवस्थामा, तथापि, मानव अवतार कृत्रिम बुद्धिमानी हो। यो कृत्रिम बुद्धि (एआई) हो, जस्तै थियो, मानव अवतार को जैव-मस्तिष्कमा प्रोग्राम गरिएको। आधारभूत कार्यक्रम पहिले नै डीएनएमा छ र पछिल्लो अवतारमा अवतारहरूको प्रजनन प्रक्रिया (अवधारणा, गर्भावस्था र जन्मको आत्म-प्रतिकृति प्रक्रिया) मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यो दिमागको प्रारम्भिक प्रोग्रामिंग अभिभावक अवतार को माध्यम ले र सबै को माध्यम ले प्रोग्रामिंग प्रक्रिया मार्फत छ जो अवतार को इंद्रशोषित गर्दछ। त्यसपछि प्रोग्रामिङ प्रक्रिया त्यसपछि समाज द्वारा लिइयो।
यो अवतार दिमाग ऐ प्रोग्राम यति उन्नत छ कि यो स्पष्ट रुपमा सबै भन्दा राम्रो इनपुट सुन्न सकिन्छ। यो हामी के लोकप्रिय मनोविज्ञान मा "अहं" बोल्छौं। म यसलाई हाम्रो जैव-अवतार नियन्त्रण गर्ने AI प्रोग्रामलाई कल गर्न मनपर्छ।
किनकि हामी मानव अवतार द्वारा घनिष्ठ एक शक्तिशाली र प्रभावकारी अहंकार ए प्रोग्राम संग घनिष्ठ छौं र हामी पनि यी अवतार को सफलता को रूप मा जाने को रूप मा देख रहे हो, हामी प्रोग्रामिंग प्रक्रिया ले र हाम्रो biobrain मा निर्धारित भूमिका मा AI हाम्रो जीवन पूरा गर्न।
यद्यपि, यदि हामी सधैं ध्यान राख्छौं कि AI कार्यक्रम मूलतः यस सिमुलेशनको बिल्डरबाट आउछ (भले ही कि मानव खुफिया एआई अधिक सिक्न लाग्दछ र त्यसैले होशियार हुदैछ) त्यसो भए हामी निर्णयहरू बीच भेद गर्न सिक्छौं जसले हाम्रो मानव अवतारलाई AI कार्यक्रम वा निर्णयहरूमा आधारित बनाउँछ जुन हाम्रो 'स्वस्थ स्व' संग ताररहित आत्मा सम्बन्धमा आधारित हुन्छ।
तपाईं तर्क गर्न सक्छ कि हाम्रो अवतार-बायो मस्तिष्क को एआई कार्यक्रम यस सिमुलेशन भित्र सही निर्णय गर्न सक्षम हुन सक्छ, तर तपाई मानिन्छ कि 'मूल खेलाडी' पर्याप्त चालाक हुनेछैन वा सिंहावलोकन छैन। चलो मानिन्छ कि खेलाडीसँग राम्रो अवलोकन छ (कुल खेल्ने क्षेत्र निरीक्षण गर्न सक्छ) र त्यसैले राम्रो निर्णय गर्न सक्छ। के यो हाम्रो अवतार-बायो मस्तिष्क (र कार्यक्रम डीएनएमा लक गरिएको एआई कार्यक्रम) लाई बाईपास गर्न राम्रो छैन? के यो आत्मा पुन: जडान फेरि सुन्न र त्यो विश्वास गर्न के हो?
यो गाह्रो छ, किनकि ए.ए.ए. कार्यक्रम ब्यवस्थापनलाई पुन: व्यवस्थापन गर्न खुसी छ। यदि तपाईं वरपरको आबादीको बहुमत बिग्रिएको छ र यसैले यसको AI कार्यक्रममा रहन्छ भने, तपाईं आफ्नो AI प्रोग्राममा पूर्ण आत्मसमर्पण गर्न रोज्न चाहानुहुन्छ। वास्तवमा, तपाईं प्रारम्भिक उमेर देखि प्रोग्राम गरिएको छ - खास गरी यदि तपाईसँग त्यो वायरलेस आत्मा जडान छ भने - त्यो जडान सुन्नु छैन। तपाईं आफ्नो जैव-मस्तिष्क एआई प्रोग्रामिङ सुन्नको लागी प्रोग्रामर हुनेछ। तपाईंको जैव-दिमाग एअर प्रोग्रामले प्रारम्भिक उमेरबाट प्रशिक्षित गरेको छ र तपाइँ (तपाइँको अवतार) यो प्रशिक्षण प्रक्रियामा पुरस्कृत वा दण्डित हुन्छ। यही शिक्षा शिक्षा प्रणाली हो र यही कारणले हामी यो शिक्षा प्रणाली बढ्दै जवान उमेरमा सुरू गर्छौं।
यसैले यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो ताररहित आत्मा जडान पुन: रद्द गर्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाइँ महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले वायरलेस आत्मा जडान नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। एआई कार्यक्रम जो तपाईंको जैव-अवतार चलाउँछ तपाईंलाई विश्वास गर्दछ कि यो सिमुलेशन मेगा महत्त्वपूर्ण छ। पत्ता लगाउन सुरु गर्नुहोस् कि तपाइँ सिमुलेशन बजाउँदै र सुन्नु भएको छ तिम्रो मूल तपाईंको वायरलेस आत्मा जडान मार्फत!
एलोन मुस्कको कम्पनी न्युरीलिङ्कको तंत्रिका लेस प्रत्यक्ष रूपमा DARPA बाट आउनेछ (जस्तै इन्टरनेट र स्मार्टफोनहरू जस्तै)
उन्नत विद्यार्थीहरूको अनुकरण सिद्धान्त
ट्याग: ai, अवतार, अहम्, विशेष, कृत्रिम बुद्धि, कार्यक्रम, अनुकरण, आत्मा जडान
11 जुलाई 2019 मा 13: 17
इकोन वा उत्पत्ति
यद्यपि, त्यहाँ एक सिम्युलेटर, वा सृष्टिकर्ता हो कि विचारको लागि एक परिचित रिंग छ, जसले हाम्रो हेरविचार गर्दछ। त्यसै गरी, एक सिम्युलेटेड ब्रह्मालाई बिर्सने कुराको विचारले देवताको धारणालाई समान बनाउँछ - उदाहरणका लागि, उत्पत्तिको पुस्तकमा वर्णन गरिएको।
11 जुलाई 2019 मा 13: 27
यस अवस्थामा, मलाई यो सिमुलेशनको बिल्डरले "हाम्रो हेरविचार गर्दछ" भनेर सोच्दैन। लेखमा अन्तिम लिंक अन्तर्गत लेख हेर्नुहोस्।
यो अनुकार सिद्धान्त एक निश्चित अर्थमा धक्का दिईएको तथ्यले यो गर्न सक्छ कि मान्छे मानवता मा चूसने को थ्रेसहोल्ड को लागी कम गर्न चाहते हो लूसफरियन एए को बहुतायत: भाइरस तंत्र मा
11 जुलाई 2019 मा 13: 29
एक पल्ट एक पल्ट, हेरफेर को माध्यम ले ऊर्जा को कटौती वास्तविकता मा निहित छ जसमा हामी अब रहछन। हामी केवल आध्यात्मिक तवरमा हिंसा भइरहेको छ।
11 जुलाई 2019 मा 14: 27
एअर ए मानव मानव अवतार अब अवतार संग एक नयाँ सिमुलेशन को निर्माण मा व्यस्त छ जो हाम्रो वर्तमान मानव अवतार को जस्तै गर्न सक्छ:
रक्षा विभाग को रक्षा उन्नत अनुसन्धान परियोजना एजेन्सी एजेन्सी को निरंतर मिसिन सामान्य सेंन्स परियोजना, जसलाई 18-मासिक बच्चा को स्तर मा मानव सामान्य भावना को मोडेल को लागी लक्ष्य छ। मानसिंह यस परियोजना मा प्रमुख जांचकर्ताहरु मध्ये एक हो।
11 जुलाई 2019 मा 14: 30
तपाईंले आफ्नो आत्मा जडान बिर्सनुको अन्तिम उपाय सिमुलेशन भित्र सिमुलेशन निर्माण गर्नु हो।
र यदि तपाईं मानव अवतार मान्दछन कि नयाँ एरिया संग विलय तपाईले अमर बनाउनुहुन्छ, तपाइँ स्टेम सेलमा आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने ती चेतनाको मूल रूपले नयाँ एआइ (हालको लुसिफरियन एआई भाइरस प्रणाली भित्र) लाई उपलब्ध गराउँछ।
यो व्याख्या हेर्नुहोस्:
11 जुलाई 2019 मा 20: 07
बुद्धिमानी बुझ्न र भावनात्मक रूपमा लिपिबाट केटाहरूलाई के बुझ्न भारी कुरा राख्छ। मलाई लाग्छ / तपाईंको पछि / मृत्यु पछि जीवित गर्ने तरिका हो जुन तपाईको स्क्रिप्ट केटाहरु द्वारा एक म्याट्रिक्समा चेतना अपलोड गर्दै छ। खैर, तिनीहरू वास्तवमा उनीहरूको मालिकलाई प्रतिलिपि गर्न खोज्छन् र शायद लुसिफर / मृत्युबाट अर्को म्याट्रिक्स / आयोममा स्विच गरेर। मलाई लाग्छ यो सानो छोटो छ किनभने यो सिर्जना गरिएको आयाम प्रणाली / ढाँचा / मापदण्डहरूको अनुग्रहले अवस्थित गर्दछ जुन लुसिफर / मृत्यु सम्भव गर्दछ।
12 जुलाई 2019 मा 00: 11
नजिकको भविष्यमा, अवतार मानिसलाई रोबोटले अझ राम्रो रुपमा प्रोग्राम गरिनेछ जुन कुनै पनि आत्मा जडान (जस्तै अझै पनि जैविक मानव अवतारहरू हुन सक्दछ) बाट पीडित छैन, ताकि आत्मा जन्माउने नयाँ जन्मेको पनि अझ राम्रो हुन्छ। तिनीहरूको AI कार्यक्रम र लुसिफरियन एई (यो सिमुलेशन चलाउने) सुन्न सिक्न पनि अधिक नियन्त्रण प्राप्त गर्दछ:
यो समय हो कि हामीले लुसिफरियन भाइरस प्रणालीमा रोक लगाउथ्यौं।
12 जुलाई 2019 मा 03: 57
मलाई लाग्छ यो सिमुलेशन ढिलाइ हो (प्रकाशको)। हामी के देख्छौं अतीतको कुरा हो, यसैले तपाइँ सजिलै भविष्य भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यो देख्दछौं किनभने हामी लग इन हुछौं। म्याट्रिक्स फिल्म धेरै तरिकामा धेरै तातो थियो। अन्त्यमा, नव म्याट्रिक्स छोड्न सक्दिन, तर तिनको अहंकार र उनको केटीको प्रेमले उसलाई फिर्तामा खेलिरहेको छ। यदि तपाईलाई सोही व्यक्तिको रूपमा सीमित जस्तो लाग्छ भने कठिन छनौट। चलो जानुहोस्, त्यसपछि हामी स्वतन्त्र र मुक्ति प्राप्त छौं। मलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो साथमा एक कठिन समय छ। एक कुरा निश्चित छ, म कृत्रिम हस्तक्षेपहरू सुरु गर्नेछु र मर्छु र यो स्तरमा अनन्त दोहोरिने छैन।
हामी निश्चित रूपमा तटस्थताको तटस्थताको आनन्द उठाउन सक्छौं र मूल जान्छ कि दुष्ट इतिहास हो।
हामीले भविष्यलाई शुद्ध राख्न को लागी यो पालन गर्नु पर्छ।
12 जुलाई 2019 मा 09: 29
पहिलो म्याट्रिक्स फिल्म मुख्य रूपमा देखाइएको थियो कि म्याट्रिक्स असीमित पाश हो र यो राम्रो छैन प्रतिरोध गर्न। त्यो पनि एक प्रकारको मुक्तिदाता (नव, एक) चारैतिर घुमाईयो।
एक फिल्मले सत्यको पूर्णतया एक मोड़को साथमा हामीलाई विश्वास गर्छ कि एक उद्धारकर्तालाई फेरि आवश्यक छ। त्यहाँ त्यहाँ आवश्यक छैन। र Matriz पनि अयोग्य छैन। यो एक भाइरस प्रणाली हो र उसले सेतो दादको साथ मान्छे (लुकाफर, बिल्डर) लाई पनि थप्पड गर्न सकिन्छ।
तथापि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो खोज हो जुन तपाईं सिमुलेसनमा बाँच्न सक्नुहुन्न। तपाईंको मूल सँधै बाहिर छ र हेर्छ। एक नक्कल परीक्षण परीक्षण हो। एक सिमुलेशन एक नक्कल हो। तपाईं आफ्नो शरीर अवतार हुनुहुन्न।
12 जुलाई 2019 मा 09: 31
छोटोमा: म्याट्रिक्सको फिल्मले भ्रम सिर्जना गरेको थियो कि यो सबै भाइरस प्रणालीलाई हटाउन धेरै उत्साहजनक र जटिल छ। यसको लागि एक प्रकारको सुपर हीरो (नव) चाहिन्छ। नयाँ येशू ख्रीष्ट।
नहीं, बकवास। चाँडै नै सम्झनु भएको हो कि तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ?
12 जुलाई 2019 मा 14: 43
लिपिको अनुयायीहरूले नतिजामा अग्रिम लिन्छन् भने, यदि हामी ट्रांहमेन्टमेन्टमेन्टको लक्ष्य पछ्याउँदछौं हामी अन्तिम दासहरू बन्न सक्छौं।
15 जुलाई 2019 मा 04: 58
राम्रो टुक्रा! आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूले यस प्रक्रियालाई जागरण गराउँछन्। त्यस भाग वा तपाईंका अन्य भागहरूमा बाँच्ने / लाइभसँग जडान गर्दै। तपाईंको सच्चा स्व, तपाईलाई जुन नाम दिन चाहानुहुन्छ। यो तपाईं को हुनुहुन्छ को बारेमा यो एक सम्झना पनि हो। त्यहाँ मानिसहरू जागिर पछि फेरि सुतिरहेका छन्। र त्यहाँ मान्छे हो जसले यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छ किनभने उनीहरूले केहि अवधारणाहरू बुझ्छन् तर वास्तवमा उनीहरूको साँचो आत्म जागिर गर्दैनन्। जो पनि जागृत छ मात्र बुझ्छ / हेर्दछ।
मलाई जसरी तपाईंले वर्णन गर्नुभएका तरिका मनपर्थ्यो, प्रायः प्राविधिक रुपमा, तर दुबै सत्य हुन्। जस्तो कि मैले यो देख्न सक्दिन, गैर-एनिमेटेड व्यक्तिहरू तिनीहरूका जागरणमा अरूलाई सहयोग गर्न एक अंश हुन्। यो यति सुन्दर छ कि यी गैर-एनिमेटेड व्यक्तिहरू मात्र 'तिनीहरूको कुरा' गर्छ। (उनको जागरण सम्म) उनीहरूलाई पनि थाहा छैन कि तिनीहरू ठूलो कार्यक्रमको भाग हुन्। मैले आफैलाई सोधे कि संसारभरका राजनीतिज्ञहरू र मानिसहरू वास्तवमा खेलको बारेमा थाहा छैन जुन तिनीहरू हुन्। तिनीहरू केवल तिनीहरूको (बेहोश) भूमिका खेल्छन्। तिनीहरू कार्यक्रम अनुसार मात्र रहन सक्छन्। यो संसार साँच्चिकै जस्तो हुनुपर्छ र यो के गर्नु पर्छ। परिवर्तन गर्न केहि पनि छैन। यदि तपाईं जागरणमा आउँनुभयो वा यो अनुभव गर्नुभएको छ भने, यो मेरो साँचो आत्मसँग कि जडान पुनर्स्थापना गर्न र तपाईं जो वास्तवमा बाँच्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि तपाईं अरूलाई पनि जागिरमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
15 जुलाई 2019 मा 10: 24
आध्यात्मिक यो एक निश्चित तरिका मा वर्णन गर्दछ, किनकि त्यसोभए टेक्निकल अंतर्दृष्टि अझै सम्म अवस्थित छैन कि हामी शाब्दिक अनुकरण मा रहछन। इमेजरी अब शाब्दिकमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामी हाम्रो शरीर (यस अवतार मार्फत) हेर्छौं / यस सिमुलेशनमा साथ खेल।
डबल स्लेट प्रयोगले यो देखाउँछ। ब्रह्मांडले कम्प्युटर कोडको रूपमा कार्य गर्दछ। हामी "मा बस्न" एक ठूलो (लुसिफरियन भाइरस) कार्यक्रम।
« ड्यूश बैंकले मंगलबार पहिलो पटक मंदीको सुरुवाती पहिलो हस्ताक्षर गरे?
कैन एनन, एपिस्टीनका पत्रहरू, क्लिंटन सम्बन्ध, 'सत्य समुदाय': यो अझै पनि ठीक हुनेछ! »
कुल भ्रमण: 10.828.376
Mindsupply op हामी कसरी ठूलो परिवर्तन ल्याउन जाँदैछौं यदि 99% inanimate छ?